अन्तवार्ता :३१५ बिधार्थी भएको पब्लिक कलेजमा ८३ जनालाई पाचँलाख छात्रबृति बितरण गर्यौ-कलेज प्रमुख – Info Bazar
अन्तवार्ता :३१५ बिधार्थी भएको पब्लिक कलेजमा ८३ जनालाई पाचँलाख छात्रबृति बितरण गर्यौ-कलेज प्रमुख
बिश्व बिधालयको अवस्था खस्किदो अवस्थमा रहेको छ। राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोज्दै छ। पोखरा १० रामबजारमा बि स २०६४ मा स्थापना भएको पब्लिक कलेजले हाल शिक्षा र व्यवस्थापन संकाय अध्यापन गर्दै आइरहेको छ। भर्खरै मात्र कलेजले बार्षिक बितरण गरेको छ। साथै कलेजले सिनेटर बनाउने प्रकिया अघि बढेको छ। यसै सिलसिलामा संवाददाता आश तमुले कालिका पव्लिक कलेजका प्रमुख ज्योतिबाबु पौडेल सङ्ग गरेको समसामयिक कुराकानी
सरकारी तथा सामुदायिक विश्व बिधालयमा अध्यापन गराउनु हुने प्राध्यापकहरु राजनितीमा व्यस्त हुदाँ विश्वबिधालयको शैक्षिक गुणस्तर हरेक बर्ष खस्किरहेको छ नि ! होइन र? यसमा हजुरको राय के छ ?
हो कतिपय प्राध्यापकहरु शिक्षण सेवालाई भन्दा पनि राजनितीलाई महत्वदिने गर्दछ। राजनैतिक आडमा पनि उहाँहरुले कुनै कुनै पक्षमा संरक्षित पनि भएको छ।पुराना प्राध्यापकहरुको तुलनामा भर्खर नयाँ नयाँ शिक्षण पेशामा आवद्द भएका शिक्षक प्राध्यापक हरु बढी क्यापाबल ,डिभोडेट र कलेज बिधार्थी र प्रशाशन प्रति बढी समर्पित देखिन्छन। अनुभवको हिसावले पुराना शिक्षक प्राध्यापकले आफ्नो पेशा प्रति इमानदारिता देखाए कुनै समस्या हुन्थेन तर अटेरी भाव,राजनितीक प्रभावको आडमा आफ्नो शिक्षण पेशा प्रति जिम्मेवादी बोध देखाउनु पर्छ। शिक्षाको गुणस्तर बढाउनसकिन्छ।
यी अवस्थाबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ? गिर्दो साखबाट कसरी माथी उकास्न सकिन्छ ?
यि सवै राजनैतिक तहबाटै खराव छ। के छ भने देखी राजनैतिक आडमा सरक्षकमा प्राध्यापकहरु नियुक्त हुने चलन छ। दलमा आबद्द प्राध्यापकहरुको काम कारवाही शिक्षण पेशा प्रतिको कमजोरीहरु औल्यादा पनि खराव भएपनि सहि छ, जायज छ भन्ने आफ्नो आफन्त कार्यकर्ता जोगाउने कार्य हुन्छ,यो गलत छ। यदी विश्वबिधालयको गुणस्तरीय शिक्षा बढाउनु छ भने गलतलाई गलत हो, सहि लाई सहि हो भन्ने कुरालाई प्रोत्सहन गर्नु पर्छ,भन्ने चेतनाको बिकास गराउनु पर्छ। राजनैतिक दवाव र भागभण्डालाई विश्वबिधालयबाट पुर्ण रुपमा हटाउदैँ सक्षम दक्ष प्राध्यापकहरुको नियुक्ति गर्नु पर्छ।
कालिका पव्लिक कलेजहरुको हकमा पनि!केही राजनैतिक आस्थाहरु हावी हो ? यसले कलेजलाई कतिको असर पारेको छ?
यसलाई मैले कम गर्दै लाने केही योजनाहरु पनि बनाएको छु। कालिका पब्लिक कलेज सामुदायिक कलेज हो। यसको संरक्षक अभिभावकत्व सबै सामुदायको दायित्व हो।सामुदायबाट नै छनिएर आएका सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्वहरुले नै कलेज सञ्चालक समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन। कलेजमा प्राध्यापकहरु नियुक्त गर्ने जिम्मा सबै सञ्चालक समितिमा नै निमित हुन्छ। नियुक्ति प्रकियामा सबै सक्षम दक्ष हुन्छन र आउछन भन्ने होइन केही राजनैतिक भागबण्डामा पनि नियुक्त छन।जसले प्रशासनलाई न टेर्ने हुन्छन। कालिका पब्लिक कलेजमा पनि राजनतिक दलमा आस्था राख्ने पनि होलान। तर म क्यामपस प्रमुखको हैसियतले प्राध्यापकहरु सङ्ग बिधार्थीहरुको शिक्षामा असर नपर्ने गरी प्राध्यापकहरुलाई आफ्नो पेशा प्रति लाग्न अनुरोध गरेका छौ। र प्राध्यापक शिक्षकहरुले पनि आफ्नो पेशा र जिम्मेवारी प्रति इमानदारिता देखाउनु भएको छ। प्राध्यापकहरुको मेहनतले पनि कलेजको बिधार्थीहरु सन्तुष्ट छन। बिधार्थीको रिजल्टले पनि कलेज प्रशासन सन्तुष्ट छ।
कलेजले सिनेटर निर्माण गर्ने तयारी गर्दै हो ?
अहिले राजनितिक दलको कोटामा सञ्चालक समिति गठन गर्ने परिपाटी छ। समिति गठन गर्दा निकै समस्या निम्तिन्छ। राजनैतिक दलको भागभण्डामा कुरा नमिल्दा समिति समयमा गठन नहुने,योजना निर्माण गर्दा बहुमत नपुग्ने, कलेज परिवारको बिकास भन्दा व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थको आडमा निर्णय हुदाँ कलेजले पाउनु पर्ने अभिभावकत्व पाउन सकिदैन। हामीले यसको उपाय खोजेका छौ। यसै बर्ष देखी हामीले सिनेटरको व्यवस्था गर्दै छौ। जसले कलेजलाई माया गर्छ, सधै भलो चाहान्छ र कलेजको विकास सेवामा हात फैलाउन चाहान्छ। उसले सिमित तोकेको रकम दिएर सिनेटर बन्न सक्छ। सिनेटर कलेजको संरक्षक हो,अभिभावक हो। उनीहरुले भित्रबाट नै कलेजको सञ्चालक समितिको गठन हुन्छ। राजनैतिक भाग भण्डाको आधारमा हुदैन। कलेजले बिकासको मार्ग पनि समाउछ किनकी निनेटरहरुको कलेजमा सामाजीक लगानी हुन्छ माया हुन्छ।
सिनेटर निर्माण पछी के ? कलेजमा व्यक्तिगत राजनैतिक हस्तक्षेप रोकिन्छ त ?
सिनेटर मास हो,सिनेटर सदस्यहरु पक्कै पनि कुनै न कुनै राजनैतिक दलहरुमा आस्था राखेका नै हुन्छन। समाजलाई पुर्ण रुपमा राजनितीबाट बिल्कुल प्रिथक गराउनु पर्छ,भन्ने होइन र सकिदैन पनि। माहन दार्श्निक ओरेष्टोले पनि भनेको छ। ःबल ष्क एयष्तिष्अब िबलष्mब।िराजनिती आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर क्यामपस गेट बाहिर राजनिती आस्था देखाउनु आपत्तिको कुरा भएन। राजनिती पनि एउटा चेतना हो। यो आवश्यक पनि छ तर यसले बिकारल समस्या ल्याउनु भएन।मेरो आशय पनि यही हो। राजनिती आखिर चेतना त हो।
किन आवश्यक पर्यो सिनेटर ? सिनेटर बने पछी कलेजलाई के फाइदा हुन्छ ?
अहिले राजनैतिक पार्टीमा आस्थावान व्यक्तित्वहरुलाई सञ्चालक समितीमा आवद्द भैइदिनुस भन्दै गुहार्ने चलन छ। किनकी राजनिती नै कुनै पनि समस्याको हल गर्ने एउटा माध्यम हो।तर राजनितीमा राजनैतिक तवरबाट समस्याको हल गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने माध्यम बन्दा समस्या निम्तायो।समिति गठन गर्दा राजनैतिक भाग भण्डाले समस्या निम्तियो।कलेजको बिकासका योजना केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वास्थपुर्ण राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दै प्रतिनिधित्वमा कुन पार्टीको प्रभुत्व बढी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले जुन गति हिनता भएको छ। सिनेटर बाट पछी बन्ने समितीबाटै कलेजले एउटा गति लिने छ भन्ने आशा छ। किनकी सिनेटर सदस्यहरुमा कलेज परिवार प्रति माया हुन्छ ,लगानी हुन्छ। यदपी यो नै समस्याको हल भने होइन तर अलि कलेजले गति पाउने छ।
अहिले कलेजमा कुन संकायको पढाई सुचारु छ त? अन्य समय सापेक्ष संकाय थप्ने तयारी छ कि नाई ?
हामीमा अहिले चारवर्षे द्य.द्यक् द्य.भ्म् तहको संकाय अध्यापन गराउदैं आईरहेका छौ। हामीसङ्ग अहिले ३१५ जना रेगुलर बिधार्थीहरु छन। कलेजको अहिले आफ्नै भवनहरु छैन,कालिका नमुना माबिको भवन र कलेजले महायज्ञ सञ्चालन गरेर निर्माण गरेको भवनमा दुई संकायका बिधार्थीहरुलाई अध्यापन गर्दै आइरहेका छौ। अहिलै नै हामी अन्य संकाय थप्ने योजनामा छैनौ । कालिका माबि नमुना बिधालयमा परिणत भएकोले बिधालयको भवनहरु बन्ने क्रम जारी नै छ। हामी पछी बिधालय सङ्ग सहकार्य गरेर सम्भव भए अन्य संकायहरु थपेर शिक्षालाई फराकिलो बनाउछौ।
अहिले देखिएको समस्या हामी हेल्मेट शिक्षक अथवा डुलुवा शिक्षक भनेर भन्छौ ! यो प्राध्यापकको वाध्यता होला तर बिधार्थीको भविश्यमाथी त खेलवाड गर्नु भएन नी होइन र ?
हामीले प्राध्यापकहरुलाई भनेका छौ। समयको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौ। मिल्न सक्ने ठाउँमा हामीले क्लास बितरणमा पनि मिलाएका छौ। एउटै शिक्षकले लगातार दैनिक ४र५ ओटा कक्षा लिन सक्दैन त्यो गारो कुरा हो। हामीले हाम्रा कलेजमा पनि धेरैमा पनि २ वा ३ क्लास दिएका छौ। र अन्य कलेज माबिमा कक्षा लिएर आउने प्राध्यापकहरुलाई पनि समय मिलाउन अनुरोध गरेका छौ।यदपी म आफैले चाहेर पनि रोक्न त सक्दिन तर हामी पछी योजना बनाएर जानेछौ।बिधार्थीको शिक्षा सङ्ग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सकिदैन।
आर्थिक रुपमा बिपन्न बिधार्थीहरुको केन्द्रबिन्दु हो पब्लिक कलेज ! कलेजले कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ त ?
अहिले कलेजमा ३१५ जना बिधार्थीहरु निअयमित छन। drop out को समस्याले गर्दा भर्ना भएको हिसावले अझ बढी छन।कलेजले जो आर्थिक रुपमा विपन्न तथा जेहेन्दार छ। उनीहरुलाई कलेजको नियम अनुसार प्रदान गरिनु पर्ने सबै बितरण गर्दै आइरहेको छ। यस साल मात्रै कलेजले पाचँ लाख दश हजार तीनसय रुपैया बराबरको छात्रबृति रकम बितरण गर्यौ। तीनसय पन्ध जना बिधार्थी भएको कलेजमा ८३ जना बिधार्थीलाई छात्रबृति बितरण गर्ने रकम सानो रकम होइन। मलाई लाग्छ यतिको रकम एउटा पव्लिक कलेजले छात्रबृति को रुपमा वार्षिक बितरण गर्ने देशै भरभरी पहिलो हो र अग्रस्थानमा छ।
छात्रबृति रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ? स्रोत केहो ?
यदपी कालिका पब्लिक कलेज पोखरा भित्रको पनि केन्द्रमा रहेकोले ग्रामिण पर्यावरणबाट अध्ययन गर्ने बिधार्थीहरुको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। कलेजको नियम अनुसार मात्र बितरण हुने छात्रबृतिले नपुग्ने अवस्था छ। केही बिधार्थीहरु आर्थिक समस्याकै कारण कलेज बीचमा छोड्ने अवस्था पनि देखियो।यसैको समस्याको समाधानको निम्ति हामीले बिभिन्न दाताहरु खोजेका छौ। हामीले गतसाल पोखरामा निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल ठेकेदार कम्पनीसङ्ग समपर्क गर्यौ । CMC ले ११ लाख ३० हजार १ सय १ रुपैया कलेजलाई सहयोग गर्यो। यस्तै हामीलाई समाजसेवी उत्म पुन बाट १ लाख २५ हजार,समाजसेवी अनिता तिमिल्सिनाबाट १ लाख १ हजार १ सय १ रुपैया दिएका छन। एक बिधार्थी को वार्षिक शुल्क १२६०० लाग्छ। हामी एक बिधार्थीको जिम्मा लिन भनेर समुदायमा पनि आह्वान गर्यौ। एक एक बिधार्थी बरावरको शुल्क जिम्मा लिनुहुने सहयोगीमनहरु धेरै छन। हामीले जम्मा गरेको रकमबाट आउने व्याच र केही सोही रकमबाट बिधार्थीलाई छात्रबृति प्रदान गरेका हौ।
अन्त्यमा तपाइको केही छ की भन्नु पर्ने ?
सर्वप्रथम त अर्को मिडिया प्रालि द्दारा सञ्चालित शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गर्ने सघसस्था व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान र क्षमता प्रतिभावानलाई प्रोत्सहन गर्दै सम्पुर्ण शैक्षिक गतिबिधिलाई समेट्ने गरी नयाँ शिक्षा डटकम अनलाइन पत्रिका सुरुवात गर्नु भएको तपाइहरुको सम्पुर्ण टिमलाई सफलतको शुभकमना दिन चाहन्छु। हाम्रो कलेज परिवारको तर्फबाट केही कुरा राख्ने मौका दिनु भयो यसको लागी धन्यवाद छ । अन्तमा कालिका पब्लिक कलेज परिवार समुदायको हो। यहाँ अध्यापन गराउनु हुनेप्राध्यापक हरुको हो, अध्ययनरक्त बिधार्थीहरुको हो। सबै जुटौ कलेजलाई उत्कृष्ट बनाउ।
This Page Total Views: 1,232
विश्व मत्स्य दिवस २०७६ का अवसरमा फेवातालमा १० हजार माछाका भुरा छोडिए
November 22, 2019by Info Baazaar